Popular Articles – How She Did It
Posted October 22, 2019 November 14, 2019 kmsadminLeaveacommentPosted in Blog, Popular Articles
“စိတ်မြန်သလောက် လူမလိုက်နိုင်တော့တာကို လက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်” “ကမ္ဘာနှစ်ခုကြား ဗျာများနေရသလိုပဲ” “တစ်နေ့တစ်နေ့ ဒီလိုပဲတစ်ပုံစံတည်းသွားနေရင်း ကိုယ်မသိလိုက်သေးခင်မှာ နှစ်တွေလတွေကုန်သွားတယ်။ ကိုယ်သိလိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ဘဝကြီးက အစရှာမရအောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်” “မှန်မကြည့်တာကြာပြီ၊ ကြည့်လည်းမကြည့်ချင်တော့ဘူး” “မိခင်ဖြစ်လာတဲ့ကိုယ့်ကို လက်ခံလာနိုင်ပေမယ့်၊ မိခင်မဟုတ်ခင်ကကိုယ့်ကိုလည်း ပြန်လိုချင်မိတယ်။” “နို့တိုက်ချင်ပေမယ့် နို့မထွက်တဲ့အခါ ဘဝမှာရှုံးနှိမ့်မှုကြီးတစ်ခုလို့ ခံစားရတယ်။” “ကျန်းမာတဲ့ကလေးလေးတစ်ယောက်ကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ပေမယ့်၊ အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ အရင်လိုမဟုတ်တော့တဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို လက်ခံရတာအရမ်းခက်တယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်းမပြောပြရဲဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ဒီလိုစိတ်ဖြစ်လို့ မုန်းမိတယ်။” “ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ အရည်အချင်းတွေမကျသွားဘူးလို့ ယုံကြည်ပေမယ့်၊ ကလေးမရခင်ကထက် ပိုပြီးကြိုးစားပြရ သက်သေပြရတာကြောင့် စိတ်ထဲမှာခံပြင်းတယ်။” “တစ်ချို့ရက်တွေ ဘာမှမလုပ်ပဲ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ချင်တယ်။” “ကလေးရလာလို့ အိမ်ထောင်ရေးသာယာသွားတဲ့သူတွေကို အားကျမိတယ်။” “ကလေးအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးနိုင်သူက မိခင်ကောင်းလား၊ ကလေးအတွက် ကိုယ်လုပ်ပေးနိုင်တာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်သူက မိခင်ကောင်းလား? တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်တိုင်က အဲ့ဒီနှစ်ခုကြား […]
Posted August 26, 2019 August 26, 2019 kmsadminLeaveacommentPosted in Blog, Popular Articles
Passion နောက်ကို အမြဲလိုက်သင့်လား? ———————————– အခုလောက်ဆိုရင်တော့ passion ဆိုတာကို ကြားဖူးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်မတို့ How She Did It မှာလည်း ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မိခင်တွေအတွက်ရော၊ ဖခင်တွေအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပြီး ရေးထားတာရှိတယ်။ Passion ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်ရှိသင့်လဲဆိုတာတွေလည်း ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတလောမှ passion နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လွဲနေတာလေးတစ်ခုကို သတိထားမိတယ်။ Passion ရှာပါ၊ passion ကိုအခြေခံတဲ့ အလုပ်အကိုင်/စီးပွားရေးကိုလုပ်ပါ၊ Passion ပါရင် အောင်မြင်တယ် စသဖြင့်ပြောတဲ့အခါ လူငယ်တွေအတွက် motivate ဖြစ်ပေမယ့်၊ ကျွန်မတို့ မိဘတွေဖြစ်သွားပြီးဆိုတဲ့ လူလတ်ပိုင်းနဲ့လူကြီးပိုင်းတွေအတွက်ကျတော့ လက်တွေ့မကျဘူး၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လွန်းလိုက်တာလို့ မြင်တဲ့အတွက် demotivate ဖြစ်စေတယ်၊ စိတ်ဓါတ်ကျစေတယ်။ တစ်ချို့ဆို စိတ်တောင်ဆိုးတယ်၊ passion ပဲပြောနေတယ် စားဝတ်နေရေးပြေလည်အောင် […]